गफ ! .....: January 2007
काली : जिन्दगीको यात्राभरी तिम्रै साथ दिन्छु म त
मलाई तिम्रो हात समाउन देउ
भुलीदिन्छु आफ्नो ब्याथा तिम्रो साथ पाए म त
मलाई तिम्रै खुशीमा रमाउन देउ ।
काले : फूलहरु देखाएर काँढा मैले टेकेको छु
यात्राभरी जिन्दगीको आँधीहुरी छेकेको छु
सक्छौ भने काँढा टेक्न
आँधीहुरी हरु छेक्न
आउ हात समाउ , यो खुशीमा रमाउ ।
काली : बर्षौं बर्षौं देखि पर्खिएको
त्यो खुशी मैले भेटएं कि
काले : छातीभित्र पिँडाले कोरेको
रेखाहरु मैले मेटाएं कि
दुबै : आउ दुई मुटु जोडी अब
जुनीभरीलाई एकै पारौं
आँधीहुरी अझै छेल्नु नै छ
मनको भिताहरु संगै बारौं ।
काले : कुनै चोट म भित्र बल्झिदिंदा
अनुराग तिमी सहिदिनु
काली : कतै खुशी म भित्र छचल्किंदा
तिमीपनि खुशी भईदिनु
दुबै: आउ आज यो बाचा बाँधी
दुई मुटुमा यौटै धून भरौं
त्यही धूनमा जिन्दगीको
जंघार हामी संगै तरौं ।
Posted by दीपक जडित at 1:35 AM No comments: Links to this post
Send me not an invitation , Gentalman
Of attendence as your speciall guest
I am just the dust of this earth
I deserve to crush beneth millians of feet
And I have no break
With being crushed .
This world has been running
In her own speed
She must have to save
Her position in the univers
But I am just the dust
The one of useless object
And move around here and there
In each blow of the wind
Neither there is any importance
Nor any address of mine
Invite me not , Gentalman
Even if I get up from my place
I am sure I cound never find
Another place in the sky
Even if I took support of strom
Finally I have to fall down
In this same earth
Do not invite me , Gentalman
I'm not suitable to your invitation
It's my pleasure that Reecha Tiwari has placed this poem to her blog http://sapanakosansar.blogspot.com .
Posted by दीपक जडित at 2:59 PM No comments: Links to this post
मलाई कसैले यति धेरै माया दियो
म आज खुशीले नाचिरहेछु
मेरो यो मनमा उसकै लागी
मैले पनि चोखो माया साँचिरहेछु ।
यति धेरै धेरै खुशी
छचल्किन्छ मनै भरी
फूलै फूल फक्रीएको
देख्छु आफ्नो वरीपरी
म फूल जस्तै फक्रीएर हाँसिरहेछु
किन लगाईदियो उसले
आज यति मिठो प्रीत
सँधै सँधै उसकै गीत
त्यै गीतभरी उसैलाई गाँसिरहेछु
मलाई माया गर्छु भन्ने कोहिपनि पाउन सकिन
एकै मुठ्ठी माया मैले कहिंपनि लाउन सकिन ।
कतै मायाको मुल्य नै तिर्न सकिन
कैले मायालुको मनभित्र छिर्न सकिन
न टेक्ने हाँगा छ न छ समाउने
झर्दैछ जिन्दगी भिर्न सकिन ।
मेरो माया कसैलाई सस्तो लाग्ने
कसैलाई झेलगरे जस्तो लाग्ने
भेटे हुन्थ्यो बाटो बरु यो रित्तो
उजाड जिन्दगी देखि भाग्ने ।
लेख्नलाई मैले एकैदिनमा ४ वटा सम्म गीतहरु पनि लेखेको छु ( यदि मैले लेखेका गीतहरु गीत भन्न सुहाउने छन भने । ) तर आज संयोग यस्तो पर्यो कि एकैदिनमा एकैसाथ दुई अलग तरिकाका गीतहरु लेख्न पुगें । सामान्यतया म गीतहरु लेख्दै गरेको दिनमा उस्तै प्रकृतीका गीतहरु लेख्थें र त्यो पनि एउटा सकेर मात्र अर्को लेखेको थिएं तर आज माथिको दुबै गीतहरु एकैसाथ लेख्न शुरु गरेर एकैसाथ सकेको नयाँ अनुभव गरेको छु ।
Posted by दीपक जडित at 10:58 PM No comments: Links to this post
आजैको भेटमा संधै भन्न भुलेको कुरा गर ।
तोरीबारी झैं पँहेलिएर फूलेको कुरा गर । १
पर पर फैलिएका ति गहुँका खेतहरुमा ,
बसन्ती हावा संगै रमाई डुलेको कुरा गर । २
कुहु कुहु कोईलीले मिठो गीत गाईरहँदा ,
हात समाई फाँटहरुमा डुलेको कुरा गर । ३
गर्मीको मौसम खोलाको त्यो पानी चिसो पिउंदै ,
बगरमा मायाको मोती बटुलेको कुरा गर । ४
यै छातीलाई सिरान हाली पैयुँको बुट्टामुनि ,
तिम्रै परी हुँ म भनेर पुल्पुलेको कुरा गर । ५
मिठो लाग्छ भने अतित टहटह जुनेलीमा ,
चन्द्रमा संग लाज नमानी खुलेको कुरा गर । ६
बिर्षिएर मिठो सबै तितो मात्र बाँकी छ भने ,
निर्धक्क भै यो छातीमा आँधी हुलेको कुरा गर । ७
यो भेटलाई फेरी अर्को शुरुवात बनाउन ,
हामी बिच तितो मिठो सबै सुलेको कुरा गर । ८
Posted by दीपक जडित at 12:09 AM No comments: Links to this post
मेरो मनको संघारभरी खुशियाली पोतिदियौ
घाम संगै झुल्किएर जिन्दगीमा ज्योति दियौ ।
यति धेरै हाँसो मेरो अधरमा खन्याईदियौ
उदाश मेरा ओठहरु मुस्कुराउने बनाईदियौ
बगर झैं प्यासी मनलाई छाल बनि मोति दियौ
बादल बनाई खुल्ला निलो आकाशमा उडाइदियौ
उचालेर भुँईबाट जूनतारामा चढाईदियौ
सम्हाल्नै नसक्ने गरि खुशी कति कति दियौ
" या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या विणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता
सा मां पा तु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्यापहा ।। "
आज बसन्त पञ्चमी या नि कि श्रीपञ्चमी अर्थात सरस्वती पूजा । सरस्वती पूजा नमनाएको पनि ५ बर्ष लागिसक्यो । नेपालमा छँदा स्कूलमा अनि गाउँमा सरस्वती पूजा मनाएको झलझली आँखैमा छ । गाउँमा हामी भब्यताका साथ सरस्वती पूजा मनाउने गर्थ्यौं । केटाहरु र केटीहरुको २०/२५ जनाको हुल भएर हामी पनि सरस्वती पूजाको लागी चन्दा उठाउन घर घर अनि पसल पसल जान्थ्यौं तर हाम्रो चन्दा माग्ने प्रकृयामा दादागिरी हुंदैनथ्यो त्यसैले हामी आशा अनुशार नै चन्दा रकम संकलन गर्थ्यौं अनि त्यसलाई पूजाको निंती र बिभिन्न कार्यक्रमको निंती खर्च गर्थ्यौं ।
पूजा गर्नको लागी सरस्वतीको मुर्ती म आफैं बनाउने गर्थें । झण्डै दुई साता अगाडी देखि परालको लुँडो बाटेर त्यसमाथी खोलाबाट ल्याईएको लिसाईलो माटोले लिपेर सुकाउदै पोल्दै म सरस्वतीको सुन्दर मुर्ती तयार पार्थें । सरस्वतीलाई लगाईदिने कपडा साडी चोलो बनाउने जिम्मा गाउंका बैनीहरुको हुन्थ्यो ।
गाउँको बिचभागमा पर्ने खुल्ला खेतमा ( मैदान त कहाँ बाँकी थियो र? ) अस्थाई मन्दिर बनाएर पूजा स्थल बनाइन्थ्यो । दिनभर केटाकेटीहरुलाई दौड , हिसाब दौड , चम्चा दौड , हाजिरी जवाफ अनि गाउँमा आमा दिदीहरुको लागी कुर्शी दौड र सबैको लागी घ्याम्पो ( घैला ) फोर्ने जस्ता प्रतियोगिताहरु गराईन्थ्यो । साँझमा पनि अलि ठुला समुहका बिध्यार्थीहरुको हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता , गायन प्रतियोगिता , नृत्य प्रतियोगिता गराउंथ्यौ । यस्ता सबै कार्यक्रमहरुमा हामीलाइ गाउँका ठुलाबडाले पनि साथ दिनुहुन्थ्यो । पूजाको प्रसाद अनि अन्य खानेकुराहरु बनाउन समेत हामीलाई गाउँका ठुलाबडाले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । ठुलाबडाहरु मध्ये नै एकजनालाई हामी सभापती बनाउंथ्यौ र सबै प्रतियोगितामा हुने विजयीहरुलाई सभापतीकै हातबाट पुरस्कार प्रदान गर्थ्यौं । कुनै कुनै पुरस्कारहरु पैसाको कमीले गर्दा राम्ररी पोको पारेको थैलोमा बुनिया (खानेकुरा) पनि हुन्थ्यो । त्यो पुरस्कार प्रदान गर्दा राम्रो हँस्यौली पनि हुन्थ्यो अनि अर्को साल हामी अलि धेरै चन्दा दिन्छौं भनेर ठुलाबडाले वचन पनि दिनु हुन्थ्यो ।
सबै प्रतियोगिता सकिएपछि पनि हामी रातभर नाचगान गरेर अथवा अन्ताक्षरी खेलेर रमाईलो गर्दै रात काट्थ्यौं र बिहान खोलामा पुर्याएर सरस्वतीको मुर्ती सेलाएपछि भने सरस्वती पूजा बिधीवत समाप्त हुन्थ्यो ।
आजभोली गाउँमा सरस्वती पूजा मनाउन छाडिएछ । गाउँमा यस्ता कार्यहरुमा उत्साहित भएर लाग्ने हामी युवाहरु सबै बाहिर बाहिर छौं । गाउँमा त मनाईदैन मनाईदैन स्कूलहरुमा पनि सरस्वती पूजा मनाउने वातावरण नभएको सुन्दा दुख लाग्छ । मैले भने यो ब्लगमा ई नै कुराहरु लेखेर एक्लै सरस्वती पूजा मनाएको ठानेको छु ।
नेपालमा हिंजै थियो सरस्वती पूजा । म समयले नेपाल भन्दा एकदिन(१२ घण्टा) पछाडी छु । हिंजो कान्तिपुर लगायत निक्कै अनलाईन नेपाली पत्रीकाहरु हेरें तर कतै पनि सरस्वती पूजाको बारेमा 'स' पनि लेखेको नभेट्दा अझ दुख लाग्यो । सबैमा त पसिंन तर पसेजति ब्लगहरुमा पनि कुनै ब्लगरले सरस्वती पूजाको बारेमा लेख्नु भएको छैन । सायद सरस्वती पूजाको कसैलाई महत्व छैन अब । कि देशको बर्तमान परिस्थितीले सबैलाई बिर्सायो कि? कि धर्मनिरपेक्षताको कुराले भुलायो? जे होस , धेरै अर्थमा मान्छेहरुले बिर्षिदै गए होलान । अनि राजनैतिक गज्याङमजाङले पनि यस्तो कुराहरुलाई ओझेल पार्यो होला ।
मैले यो दिनलाई सबै भन्दा पहिले सरस्वती पूजा भनेरै चिनेको थिएं । सानो हुँदा स्कूलमा सरस्वती पूजा हुने दिन साह्रै रमाईलो लाग्थ्यो । त्यसपछि श्री पञ्चमी भनेर जानें । गाउँघर तिर केटाकेटीको नाक कान छेडिदिने अनि बहर गोरुलाई पहिलो पल्ट दाउने ( जोत्न सिकाउने ) चलन हुन्थ्यो । यो दिनलाइ मैले बसन्त पञ्चमी भनेर सबै भन्दा पछि बुझें तर आजभोली यो दिनलाई बसन्त पञ्चमी भन्ननै अलि राम्रो लाग्छ ।
मैले माथी शिर्षकमा बयरको पनि जिकिर गरेको छु । यो समयमा गाउँभरी , घरघरै लटरम्म बयर फलेका हुन्छन । कतै पाक्न लागेका त कतै कट्मेरो अवस्थाका बयरहरु चोरी चोरी खाँदै हिंडेको दिन पनि अझै ताजा छ । कैलेकाहिँ त बयर धेरै खाएर ज्वरो पनि आउंथ्यो । सिजनमा सर्बत्र पाइने बयर मेरो विचारमा केटाकेटीहरुको निंती भगवानले श्रीजना गरेको फल हो । खानको लागी त ठुलामान्छेहरुले पनि रुचिका साथ खान्छन बयर तर महत्व भने कम दिन्छन । बयरको अचार बनाएर खाने चलन पनि छ । कतै गुँणमा डुबाएर गुलियो पारेर त कतै अमिलो बनाएर बयरको अचार बनाईन्छ ।
मैले स्कूलमा हुंदा पनि सानैमा बयरको बिषयमा दुईवटा पाठहरु पढेको सम्झना छ । एउटा भुण्टे र बयर भन्ने कथा जस्तो पाठ थियो जस्मा भुण्टेले भाँडाभित्रको बयर मुठ्याएर हात अड्काएको कुरा स चित्र थियो । उक्त चित्रको भुण्टे तँ होस भनेर दाजुले मलाई जिस्क्याउनु भएको पनि मलाई याद छ । अर्को पाठको भने शिर्षक याद छैन त्यसमा माईत हिंडेकि दुई दिदी बहिनी मध्ये बहिनीले बाटोमा भेटेको बयरको बोटलाइ वरपरीका झारपातहरु उखेलेर गोडेर हिंडेको र माइतबाट फर्कंदा बयरले फल दिएको अनि दिदीले केहि नगरी माइत गएर फर्कंदा बयरको बोटले घोचेको कुरा लेखिएको थियो । त्यो पाठ पढेर मैले डाढे भन्ने शब्द चिनेको सम्झना छ । उक्त कथामा दिदी पात्रलाई डाढे चरित्रमा देखाईएको थियो । ति दुई ठाउँबाहेक अन्य कतै पनि किताबहरुमा मैले बयरको बारेमा चर्चा गरेको देखेको छैन बरु शँभुजित बाँस्कोटाको कुनै यौटा फिल्मी गीतमा भने ए माया खाउं भने खाउं त नि काँचो बयर भनेको सुनेको छु । बयरको गुदी(बिंया)ले निमोनिया जाती पार्छ भन्ने पनि सुनेको छु मैले तर सत्य हो कि हैन त्यो त थाहा छैन ।
मैले भने गाउँमा सरस्वती पूजा गर्ने चलन थालेदेखि सरस्वती पूजाको दिन सरस्वतीलाई नचढाई बयर खाँदिनथें ।
Posted by दीपक जडित at 12:40 AM No comments: Links to this post
मैले जानु छ चुपचाप
छाडेर तिम्रो परिवेशलाई
हजारौं ईच्छाको वावजुध
जहाँ डोर्याउंछ मलाई
मेरो भाग्यको रेखाले
मैले जानु छ चुपचाप ।
यो मेरो आफ्नै
विदाईको घडी हो
म आफैंलाई विदा गर्ने छु
चुपचाप सहेर आँशुहरु
तिमी अन्जान छौ
तिमी पनि आँशुहरु झेल
भित्र भित्र दुख्ने गरी
पिंडाहरु समेट ।
एक अर्कालाई सम्झन हामीलाई
कुनै चिनोको जरुरत पर्ने छ
हामी त एक अर्कालाई
बिर्षिएर पनि सम्झने छौं
त्यसैले म जाँदैछु
त्यो दुरगामी यात्रामा
जहाँ पुगेर म
तिमीलाई साथै पाईरहनेछु ।
तिमी अनभिज्ञ छौ
तर मैले त जानु नै छ
यो मेरो विदाईको घडी हो
भोली मलाई नपाएर
तिमी नरोइदेउ बिन्ती
म त गएर पनि
संधै तिमी संगै हुनेछु
अनि सधैं हुनेछौ
तिमी म संगै
त्यसैले आशा गर्छु
मेरो यो विदाईले
कुनै पर्खाल उठाउने छैन ।
Posted by दीपक जडित at 12:02 AM No comments: Links to this post
मुटु भरी लेखे जती तिम्रो नाउँ मेटिदिएं
तिम्रो यादमा बल्झिरने घाउ पनि रेटिदिएं
अब दुख्दैन यो घाउ म त लिन्न तिम्रो नाउँ
एकोहोरो मैले मात्र प्रेमको गीत कति गाउँ ।
तिमी हाँस्दा यो मायामा दिलै खोलेर
म त रोएं यै मायाले भित्र पोलेर
भै गो अब म त रुन्न झुठो प्रेममा अन्धो हुन्न
रहरको हात बढाई कहिले पनि तिम्लाई छुन्न ।
तिम्ले माया धेरै पायौ अरु अरुको
मैले माया हार्ने दाउ लगाएझैं भो
अब बाजी लाउंदिन भो मायाको गीत गाउंदिन भो
प्यास बोकि छाती भरी तिमी छेउ आउंदिन भो ।
Posted by दीपक जडित at 1:08 AM No comments: Links to this post
" मेरो सबै भन्दा नजिक के छ ? " यो प्रश्न यदि म आफैंले आफैंलाई गरेर आफैले जवाफ दिनु पर्यो भने म मेरो सबै भन्दा नजिक गीत छ भन्छु । गीत बिना म अधुरो त हुन्छु कि हुन्न त्यो त थाहा छैन तर गीत बिना म बस्न सक्दिनं यो साँचो हो । पाँच बर्षको हुंदा देखि म स्कूल जान थालेको मलाई राम्रो थाहा छ म स्कूल जानु भन्दा अगाडि देखि नै गीत गाउंथें । स्कूल जानुभन्दा अगाडी गाएको गीत मलाई अझै पनि याद छ ।
कस्की छोरि हौ तिमी चौतारीमा बसेकि
झण्डै मैले सिंदुर धसें कि.........? संभवत मैले गीत भनेर गाउन जानेको र गाएको पहिलो गीत यहि नै हो ।
आजभोली पनि म गीत बिना बस्न सक्दिनं । सुनेर , गुन्गुनाएर (गाएर) अथवा लेखेर (नयाँ) म संधै गीत संगै हुन्छु अनि गीत म संगै ।
मैले सबैभन्दा धेरै पटक सुनेको गीती अल्बम रामकृष्ण ढकालको आशा हो त्यसपछि दीप श्रेष्ठको दृष्टी अनि त्यसपछि 1974 AD । सुन्नलाई म सबै प्रकारका गीतहरु सुन्छु राम्रो छ भने मनपराउंछु पनि तर गजलहरु सुन्न मलाई विशेष मन पर्छ । गजल गायकमा जगजित सिँह मलाई औधि मन पर्ने गायक हुन । नेपाली गायकहरुमा मलाई भक्तराज आचार्य सबैभन्दा मनपर्ने गायक हुन । भक्तराज केहि बर्ष यतादेखि गीत गाउन नसक्ने अवस्थामा छन । भक्तराज गीत गाउन नसक्ने भए भन्ने थाहा पाउंदा म रोएको थिएं । त्यो बेला म नेपालमै थिएं । भक्तराजको मैले धेरैपटक सुनेको गीत ' मलाई मेटन देउ मैले कोरेका रेखाहरु ' भन्ने हो । पुराना जमानाका गायकहरु फत्तेमान , बच्चु कैलाश , रुबि जोशी , योगेश बैद्य आदि मलाई मन पर्ने गायकहरु हुन भने स्व नारायण गोपाल , स्व अरुण थापा लगायतका अन्य गायकहरु पनि मलाई मन पर्छन सबैको नाम अहिले याद आउंदैन ।
पाँच छ कक्षातिर पढ्दा मलाई गीत लेख्न रहर लाग्थ्यो । त्यसबेला नयाँ गीत लेख्नको लागी रच्ने (कथ्ने) कोसिस गर्दा मेरो मनमा खाली त्यसबेला भएकै गीतहरु मात्र आउंथ्यो र मैले लेख्नको लागी त गीत बाँकी रहेनछ सबै अरुले लेखेर सकेछन जस्तो लाग्थ्यो । त्यसबेला म बाँसुरी बजाउन पनि रहर गर्थें , घरमा हलो जोत्न बसेको टने नामको सतारकेटाले मलाई हाम्रै खेतको मलबाँसको टुप्पोको बाँसुरी बनाईदिएको थियो । घरमा मलाई सतारको बाँसुरी बजाउनु हुदैन भन्थे तर म उसको बाँसुरी पनि बजाउने गर्थें किनकि उसको बाँसुरी मेरो भन्दा निक्कै राम्ररी बज्थ्यो । पछि म आफैंले पनि बिभिन्न साईजका निक्कै बाँसुरीहरु बनाएको थिएं । मैले जतिबेला पनि बाँसुरी बजाउने गरेकोले मलाई सबैले जादुवाल (चटके) भन्थे । बाँसुरीले मलाई कति सम्म प्रभाव पारेछ भने मैले पहिलो गीत पनि बाँसुरीलाई नै समेटेर लेखेको छु ।
बाँसुरीको धून संगै माया तिमी आईदेउन
बसन्तको सुर संगै पिरतीको गीत गाईदेउन । नौ दश बर्षको हुंदा लेखेको यो गीतमा मैले कुन मायालाई डाकेको थिएं त्यो भने मलाई थाहा भएन । यो गीतको अरु अंश म संग छैन पनि र मैले पछि लेखेको पनि छैन । त्यसपछि मैले लेखेका गीतहरु कति त हराए पनि होलान तर ४७ साल देखि लेखेका गीतहरु म संग प्राय छन । लेख्दै जाँदा मैले एक अञ्जुली माया भन्ने र मन हराए पछि भन्ने दुई गीति संग्रहहरु ( अप्रकाशित ) बनाएको छु । एक अञ्जुली मायामा मैले एकसय एघार वटा गीतहरु संग्रहित गरेको छु र त्यसभित्रकै दश वटा गीतहरुको एक अञ्जुली माया भन्ने गीति अल्बम पनि बनाएको छु । मन हराएपछि भन्ने संग्रहमा भने ८६ वटा गीतहरु संग्रहित छन । एक अञ्जुली मायालाई मैले नेपालमा हुंदै संग्रह बनाई सकेको थिएं भने मन हराए पछि भने अमेरिका आएपछि दुई बर्ष अगाडी तिर संग्रह बनाएको हुं । त्यसपछि लेखेका गीतहरु कति छ म संख्या गनेर भन्न त सक्दिनं तर अर्को यौटा संग्रह बनाउन पुग्ने भएका छन होला जस्तो लाग्छ ।
एक अञ्जुली माया गीतिअल्बम नेपालमा केहि समय अगाडीनै बिमोचन गरिसकेको भएपनि बजारमा ल्याउने जिम्मा लिएको धउलागिरि क्यासेट सेण्टरले अझै सम्म बजारमा लगिदिएको छैन । भर्खरै सुनेको छु अब छिट्टै बजारमा जांदैछ अरे । म आफु यता अमेरिकामा भएकोले पनि होला सायद नेपालमा मेडियाहरुमा राम्रो प्रचार प्रसार हुन पाएको छैन । उक्त गीतिअल्बमका संगीतकार टिका भण्डारी पनि अहिले अमेरिकामै हुनुभएकोले बिज्ञापनमा अझै कमी भएको छ । त्यसो त बजारमा तुरुन्तै लगेर २ महिना सम्म सबै मेडियाहरुमा बिज्ञापन पनि बजाउने समेत जिम्मा लिएको धउलागिरीले अलि हेलचेक्र्याँई नै गरेको हो भन्ने मलाई लागेको छ । नेपालमा काम गर्ने जिम्मेवारी लिएर पैसा लिईसकेपछि किन यस्तो गरिन्छ ? कतै यस्तो बिषयहरुमा गतिलो कानुनको अभावले हो कि ?
कैलेकाहिं त लाग्छ नेपालमा गएर म्युजिक कम्पनि पो खोल्नु पर्छ कि ? आँखिर काम लिएर नगरेपनि पैसा त कमाई हुने रहेछ ।
Posted by दीपक जडित at 1:50 PM No comments: Links to this post
कुन मायाले मन भाँच्यो कुन मायाले जोड्यो ।
कुन मायाले वचन् राख्यो कुन मायाले तोड्यो । १
माया यौटै हुन्छ भन्थें सँधै साथ दिन्छ भन्थें ,
कुन मायाले साथ दियो कुन मायाले छोड्यो । २
फैलिएको फाँट भै म उम्रने मनको खेत ,
कुन मायाले बाँझो राख्यो कुन मायाले गोड्यो । ३
मुटु कैले पग्लिदिन्छ कैले हिउँ भई जम्छ ,
कुन मायाले जतन् गर्यो कुन मायाले फोड्यो । ४
हिंड्दैछु म अर्कै बाटो पुग्नु पर्ने अन्तै थियो ,
कुन मायाले बाटो लायो कुन मायाले मोड्यो । ५
Posted by दीपक जडित at 4:04 PM No comments: Links to this post
मन राखेर माया दिएं आफ्नै मुटु खाली पारी
मनै लगी निष्ठुरीले यसपाली त जालै गरी ।
टाढा हुंदा आफ्नै मन मुटु थाम्दै बसिरहें
त्यै मनको पहिरोमा तल तल खसिरहें
मुटु चुंडी बैगुनीले रगतको आहाल पारी
जाउँ कहाँ कता तिर हराएको मन खोज्न
मन बिना नसकिने रैछ हजुर माया रोज्न
झुठो रैछ त्यसको माया देखाईरन्थी घरी घरी
Posted by दीपक जडित at 12:06 AM No comments: Links to this post
टुक्रा टुक्रा जोडिएर
तिम्रो सामु खडा छु आज
घरी चुहिएर थोपा थोपा
तरल बनेर बग्दै
घरी प्रचण्ड रापले
सुक्दै हावा संग
सर्वत्र ब्याप्त छु आज
मेटिएर मैलो चित्र झैं
ठम्याएका छौ कि ?
Posted by दीपक जडित at 11:32 PM No comments: Links to this post
बिना गल्ती माग्दा पनि माफी किन पाईएन
भै गो अब माग्दिन भो माफी मलाई चाहिएन ।
आफैं दोष देखाएर फेरी आफैं रिसाउनुभो
भनिदिनोस मैले चाहिँ यो मन कहाँ बिसाउनु हो
जानी जनी कैले नि हौ झूठो कसम खाईएन
बिना गल्ती माग्दा पनि माफी किन पाईएन ।
आफु किनारामा बसी खोलामा मलाई बगाउनुभो
निर्दोश थिएं तर यो कस्तो अभियोग लगाउनुभो
असत्यलाई रचि कहिल्यै झूठो गीत गाईएन
Posted by दीपक जडित at 12:35 AM3comments: Links to this post
बनोस नेपाल नयाँ भएर समुन्नत सदा अगाडी बढोस
नेपालीपोष्ट डट कममा प्रकाशित ।
Posted by दीपक जडित at 3:02 AM2comments: Links to this post
मुल सडकमा भेट हुंदा हिंड्यौ तिमी तर्की तर्की
मैले मात्रै हेरिरहें तिमीलाई फर्की फर्की
असारे त्यो झरी जस्तै रुन्छ मन दर्की दर्की
किन हिंड्यौ मुल सडकमा भेट हुंदा तर्की तर्की ।
दुई वचन बोल्दा पनि बोल्छ्यौ तिमी झर्की झर्की
तिम्रो रुखो वचनले पोल्छ मुटु चर्की चर्की
एकै नजर हेर्दा पनि हेर्छ्यौ तिमी सर्की सर्की
तिमी हिंड्यौ अर्कै संग लस्सिएर मर्की मर्की
मैले मुर्छा खाँदा ब्युँझाई दिए पानी छर्की छर्की
बसेकै छु म त अझै तिमीलाई नै पर्खी पर्खी
Posted by दीपक जडित at 10:57 PM No comments: Links to this post
फूलै फूलको डाली डाली
मनै भरी खुशियाली
पाएं हजुर यसैपाली ।
रातै भरी जुनेलीमा
जून संगै नुहाएकी
टिका रातो सुहाएकी
बसिदियौ मेरो मनमा
उमंगको दियो बाली ।
थुँगा थुँगा टिपी फूलको
सुन्दर माला गाँसे जस्तै
फूलकै जोवन पैंचो लिई
फूल संगै हाँसे जस्तै
तिमी फूल भयौ म त
भई दिन्छु फूलको माली ।
Posted by दीपक जडित at 12:04 AM No comments: Links to this post
'मैले ब्लग किन शुरु गरें?'
'रहरले सायद । स्पस्ट रुपमा म संग जवाफ छैन ।'वास्तबमै मैले अरुको ब्लग देखेरै ब्लग लेख्न शुरु गरेको हुं तर अब आएर आफ्नो ब्लग लेखाईलाई अरुको नक्कल हो भन्दा आफैंप्रती अन्याय गरेको हुनेछ त्यो किनभने ब्लग लेखाईले मेरो दैनिकीमै ठुलो प्रभाब पारिसकेको छ । ब्लगर हुनु अब मेरो लागी रहर मात्रै नरहेर एक प्रकारले आवश्यकता बनिसकेको छ ।
आजभोली म अरुहरुको ब्लग भित्र निक्कै छिर्ने गर्छु तर पनि ब्लग के हो ? किन लेखिन्छ ? जस्ता प्रश्नहरुको सहि जवाफ म संग छैन । ब्लग के हो भन्ने बारेमा ब्लगलाई परिभाषित गर्नेहरुले एकातिर परिभाषित गरिरहेको र ब्लगलाई प्रयोग गर्नेहरुले अर्कोतिर प्रयोग गरिरहेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई , म आफैंले पनि ब्लगलाई त्यसरी नै प्रयोग गरिरहेको छु हुनत कतिपय कुराहरुको प्रयोग विज्ञानको प्रयोग जस्तो यौटै सुत्रबाट गर्नु पर्छ भन्ने हुन्न । ब्लग पनि परिभाषित गरिए अनुशार नै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने के छ र ? प्रयोग भए अनुशार भोली यसको परिभाषा निस्कन पनि सक्छ - प्रयोजनमा आए अनुशारका अनेकौं परिभाषाहरु माझ ।
एकल पत्रकारिता लाई अंगालेर हिंडेको उमेश श्रेष्ठले चलाउनु भएको नेपाली भाषाकै पहिलो मेरो संसार ब्लग मैले धेरै छिर्ने ब्लग हो । मेरो संसार भित्र म केहि त्यस्तै परि न आए २४ घण्टामा म ३ पटक छिर्ने गर्छु - पहिलो पटक बिहान ८ बजे देखि ९.३० सम्म , दोश्रो पटक दिउंसो ३ बजे देखि ४.३० सम्म र तेस्रो पटक राती १० बजे देखि प्रायगरी २.३० सम्म । यो समय मेरो इन्टरनेटमा पस्ने समय हो र यो पुरै समय म मेरो संसार भित्र मात्रै बस्छु भन्ने पनि हैन तर यि समयावधिमा म प्रत्येक पटक मेरो संसार भित्र पसेको हुन्छु र एक पटक पस्दा कति लामो समय सम्म म त्यहाँ बस्छु भन्ने चांही त्याहाँ भएका खुराकमा भर पर्छ । जे होस प्रसिद्दिको शिखरमा भएको मेरो संसार मेरो पनि प्रथमप्यारो ब्लग हो ।
त्यसपछि मैले नियमित घुम्ने गरेका ब्लगहरु संकल्प पोख्रेलको हाम्रो देश , चहल सयपत्रीको सयपत्री , अनामिकाको से ना समथिङ्ग आदि हुन - त्यसो त फुर्सद पाए सम्म अन्य अनेकौं ब्लगहरुमा पनि म पस्ने गर्छु ।
आज सम्म मैले प्रवेश गरेका ब्लगहरु मध्येमा समाचार मुलक ब्लगहरुलाई छाडेर भन्नु पर्दा मलाई से ना समथिङ्ग राम्रो लाग्यो । त्यहाँ भित्रका खुराकहरुमा कति दम छ भन्ने भन्दा पनि ब्लग लेखाईको दृष्टीमा राम्रो छ से ना समथिङ्ग । पहिलो चोटी (केही हफ्ता अगाडी) से ना समथिङ्ग ब्लग हेर्दा मलाई आफ्नो ब्लग त ब्लग नै हैन कि जस्तो पनि लाग्यो तर ब्लग भनेको यदी आफ्नो भावनाहरु पोख्ने(साटासाट गर्ने) र त्यसको प्रतिकृया पनि पाउन सकिने ईन्टरनेट डायरी हो भने म मेरो डायरीमा आफुले चाहेको कुरा चाहे अनुशार लेख्न सक्छु । मैले आफ्नो ब्लगमा धेरै जसो आफ्ना रचनाहरु राख्ने गरेकोले मलाई त्यस्तो भएको हो । त्यसो त ब्लगमा चहल सयपत्री जी ले नेपाली भाषाकै पहिलो साहित्यिक ब्लग भनेर साहित्यिक रचनाहरुनै मात्रै राख्ने गर्नु भएको छ र कतिपय ब्लगलाई नेपाली भाषा र साहित्य प्रति समर्पित भनेर पनि भनिने गरिएको छ । मैले भने धेरै जस्तो आफ्नै मात्रै रचनाहरु राख्ने गरेकोले न साहित्यिक ब्लग भन्न सक्छु न साहित्य प्रति समर्पित नै ।
नामाकरण गर्दा मैले पनि मेरो ब्लगलाई मेरो साहित्य संसार र विविध भनेर गरेको छु र त्यसै अनुरुप रचनाका अलावा अन्य कुराहरु पनि कहिलेकाहिं राख्ने गर्छु । भन्नुनै पर्दा मेरो ब्लग आफ्नै फुटकर रचनाहरु संग्रह गर्ने गतिलो र सजिलो संग्रहथलो भएको छ । शुरु गर्दा यस्को उद्देश्य जे जस्तो भएपनि अब भने आफ्ना फुटकर रचनाहरुलाई छरिन वा हराउन नदिने नै यसको उद्देश्य भएको छ ।
Posted by दीपक जडित at 10:55 PM No comments: Links to this post
बिषालु यो दुनियांमा बिषै किन पिउनु पर्यो
नपिएकै बिष लागेर आज चोखो माया मर्यो ।
दोष देखाई बिना कसुर मलाई औंला उठायौ
हुंदै नभएका अनेक दषि प्रमाण जुटायौ
तामा तुल्सी छोए पनि खै त कहाँ काम गर्यो
बेवारिसै छोडे हुन्थ्यो मन बाहिरै पाखामा
सहन नै नसक्नेले ब्यर्थै राख्यौ आँखामा
स्वाँग रचेर राख्ने हुंदा आँशु संगै आजै झर्यो
Posted by दीपक जडित at 4:02 PM No comments: Links to this post
जलाई आफ्नै वस्ती उता जनयुद्ध हुन्छ ।
बिनाश गरी वंश यता ज्ञानी बुद्ध हुन्छ । १
कहाँ कस्को विश्वास अब हामी कता जाने ,
पिल्सिएर बिचमा मन सार्है क्रुद्ध हुन्छ । २
जस्को कुरा सुन्यो उ नै ठिक छ जस्तो लाग्ने ,
कृत्य सब गलत् मात्र विचार शुद्ध हुन्छ । ३
जिउने चाह मात्र त छ खुला हावा छैन ,
निमोठिएर घाँटी सासै अवरुद्ध हुन्छ । ४
फरक् सोच बोकि परिवर्तन खोजे पनि ,
हिंड्नै पर्ने सडक उहि नामै जुद्ध हुन्छ । ५
नेपालमा राजदरबार हत्याकाण्ड रचाएर ज्ञानेन्द्र राजा भएको केहि महिना पछि मैले लेखेको यो गजल प्रकाशित हुन्छ कि भनेर मैले दुई चार पत्रीकामा दिईहेरेको थिएं तर कतै पनि प्रकाशित भएन । यस्ता किसिममा रचनाहरु लेख्दा कुनै समय विषेशलाई ईङ्गीत गरेर लेखिएको हुन्छ र त्यस्तो समयले कोल्टो फेर्न बित्तिकै यस्ता प्रकारका रचनाहरु लगभग अर्थहीन हुन पुग्छन । जे जस्तो भएपनि आफुले लेखेको कुरा आफुलाई माया लग्दो रहेछ त्यसैले आज खोजेर यो गजललाई यहाँ राखेको छु ।
Posted by दीपक जडित at 11:13 PM No comments: Links to this post
संसार राम्रो देखिन्छ है आफु राम्रो बन
भेटिंदैन कालो मैलो सफा राखे मन
नरेट्नु है मुटु बरै वचनको छुराले
नदुखाउ दिल चित्त सानो कुरैले ।
बांचुञ्जेल सम्म बरै तेरो मेरो भनेपनि
आफु बाहेक अरुलाई मान्छे नै नगनेपनि
जानेबेला सबले बरै एउटै बाटो जानुपर्छ
मुठ्ठी जति कसे पनि हात खाली लानुपर्छ ।
घमण्डको लिस्नु लगाई धर्ती आकाश जोडेपनि
आफु आकाशमा बसी सबलाई भुईँमा छोडेपनि
त्यो भन्दा त धेरै हुन्छ दुईचार मिठो बोली बोले
रित्तिदैन मन बरै त्यसलाई सबै सामु खोले ।
Posted by दीपक जडित at 3:25 PM No comments: Links to this post
कविता : जिवन यात्राको सम्झनामा सम्झनाको यात्रा संग ।
कागजका प्रत्येक पृष्ठहरुमा
तिमीले उनेर छाडेका
तिम्रो हृदयका एक एक भावनाहरुमा
कहिं पनि मैले
नि: सार जिवन पाउन सकिंन
अक्षर अक्षर भएर
क्रमश: शब्द , हरफ , वाक्य र
अध्याय अध्याय बनेर
छरिएको तिम्रो मुटु हेर्दा
जिवन र जगत प्रति
आशावादी दृष्टीकोण पाएको छु ।
तिम्रो विचारको हाराहारीमा
नैराश्यता , उदाशिनता र
निराशावादको उपस्थिती थिएन ।
केवल तिमी थियौ
जति जे हुनु
सफलताको शिखर आरोहित
मेरो एक एक पाईलामा
खुड्कीलो बनेर उपस्थित थियो
तिम्रो माया थियो
म पुन: फर्किएको छु
त्यही जिवनको भोगाईमा
जहाँ सदैब म
अर्थहिन एक्लो जिवनमा
सुर्य अस्ताई सकेको
बाँचेको हुन्थें ।
मैले छुट्याउन नसकेर
अन्योलित छु कि ;
कहाँनेर तिम्रो जिवनको
कुठाराघात भयो ?
भ्रमित छु कि ;
" एक एक भूललाई
अर्को सत्यले सच्याउंदै
उज्यालोमा पाईला टेक्नु पर्छ । "
कुन भूलले छोपेर
बाटो बिरायौ तिमीले ?
एक्लै पार गर्नुपर्ने
जिवनको अनन्त मोडहरुमा
तिम्रो सम्झनाको सहारा लिएर
म कहाँ सम्म यात्रा गर्न सक्छु
त्यसैले म आज
आफ्नै जीवन यात्राको सम्झनामा
सम्झनाको यात्रा संग
विवश छु सम्झौता गर्न ।
Posted by दीपक जडित at 3:30 PM No comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 12:10 AM No comments: Links to this post
मेरो ब्याक्तीगत ब्लग ' मेरो साहित्य संसार र विविध ' मार्फत म दीपक जडितको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई नयाँ वर्ष सन २००७ को मंगलमय शुभ-कामना ।
साथमा नयाँ वर्षको उपहार स्वरुप एउटा गजल --------
आजको दिन त कम्तीमा नयाँ वर्षको कुरा गर ।
मनका सारा पिंडा दुख भुलेर हर्षको कुरा गर । १
भोली त टेक्नु छ सफलताको शिखर तिमीले पनि ,
त्यसैले भन्छु , भोली गर्नुपर्ने संघर्षको कुरा गर । २
मोजमस्ती र मनोरन्जन मात्रै जिन्दगी हैन बुझ ,
गंभिर भएर जीवन के हो ? विमर्षको कुरा गर । ३
कति पायौ अनि कति गुमायौ जिन्दगीमा आजसम्म ,
दुख सुख हार जीत सबैमा उत्कर्षको कुरा गर । ४
नयाँ दिन देखि नयाँ कुराको शुरुवात गर्नलाई ,
आलटाल हैन ठोष रुपमा निश्कर्षको कुरा गर । ५
Posted by दीपक जडित at 1:49 PM 1 comment: Links to this post